18. Magga Paccaya | Dhamma Training Center
Aug 31 st, 2020
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၈ – မဂ္ဂပစ္စယော Magga Paccayo (Path condition)PDF File
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၈ – မဂ္ဂပစ္စယော Magga Paccayo (Path condition)...
Dec 28 th, 2019
Dec 27 th, 2019
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (1 of 8)
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) Maggapaccayoti – maggaṅgāni maggasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. Magga Paccaya (Path condition) Number...
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (2 of 8)
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (2 of 8) zawgyi ၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccaya (Path condition) ၄၃၂။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန...
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (3 of 8) zawgyi ၁။ မဂ္ဂင် = မဂ္ဂ =လမ်း = Path, Way မဂ္ဂင် (၈)ပါးကို လူသိများပါသော်လည်း ပဋ္ဌာန်းမဂ္ဂပစ္စည်း...
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (4 of 8)
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (4 of 8) ၁၂။ မဂ္ဂသစ္စာ ၁- ဒုက္ခသစ္စာ ၂- ဒုက္ခသမုဒယသစ္စာ ၃- ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာ ၄- ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပဋိပဒါသစ္စာ အရိယော အဋ္ဌင်္ဂိကော မဂ္ဂေါ =...
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (5 of 8) zawgyi ၁၉။ နတ်ပြည်ရောက်လို့နှလုံးမသာမယာဖြစ်နေရှာတဲ့ သမဏနတ်သား အဲဒီလို သိရတဲ့အခါ သမဏနတ်သားမှာ အကြီးအကျယ် နှလုံးမသာမယာ ဖြစ်ရတယ်။ “ငါ ရဟန်းတရား...
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (6 of 8) zawgyi ၂၅။ မဂ္ဂင်ရထားက လူများစေကာမူ အသံမမြည်ပါ အဲဒီမှာ အသံမမြည်တဲ့ ရထားဆိုတာကတော့ ရှေးခေတ်ကရှိခဲ့တဲ့ မြင်းရထားတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ပြီးပြောတဲ့...
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (7 of 8) zawgyi ၂၉။ ဂါထာ သုံးပုဒ်အတွက် ဆောင်ပုဒ် (၁) လမ်းဖြောင့်မည်တွင်၊ ထိုမဂ်ပင်၊ ရပ်ခွင်ဘေးမဲ့ နိဗ္ဗာန်ပါ။...
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (8 of 8)
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (8 of 8) zawgyi ၃၈။ ကုသိုလ် အကုသိုလ် အကြောင်းသိကောင်းစရာ ၁၉၃။ ဧ၀ံ မေ သုတံ – ဧကံ သမယံ...